Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ọgwụ cancer Zantrene ọhụrụ na-echebe obi pụọ na ọnwụ
Akụkọ na -agbasa Australia • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! • Akụkọ Ahụike
Australian biotech na precision oncology ụlọ ọrụ, Race Oncology, ekwuputala ọganihu preclinical nnyocha nke chọpụtara na ya ọgwụ Zantrene® nwere ike ichebe mkpụrụ ndụ akwara obi site na ọnwụ na-emeziwanye ogbugbu nke mkpụrụ ndụ cancer ara mgbe ejiri ya na anthracycline, doxorubicin.
Ọgwụ Race Oncology Zantrene egosiri na-echebe mkpụrụ ndụ akwara obi mmadụ site na ọnwụ chemotherapy kpatara anthracycline. Anthracycline bụ ọgwụ mgbochi ọrịa kansa kacha eji ma dị irè, mana ha nwere ike ibute nnukwu mmebi obi.
Nchoputa nke izizi gosikwara ike Zantrene nwere imekorita ya na anthracyclines di ugbua iji gbuo sel cancer ara nke oma.
N'ihi mkpa nchoputa ahụ pụtara, a ga-enyocha Zantrene ngwa ngwa n'ụlọọgwụ ahụ yana nnwale Phase 2b akwadoro maka 2022 na ndị ọrịa ara ara nwere nnukwu ihe egwu nke mmebi obi anthracycline kpatara.
Na-enye ikike nke nlaghachi azụ ụlọ ọgwụ na azụmaahịa sitere na ụdị Zantrene/anthracycline ọhụrụ na ngwakọta.
Nke a bụ oge mbụ ọgwụ gosipụtara ikike nke ichekwa ọrịa kansa ma chebe obi site na mmebi anthracycline. Nchọpụta a na-enye ọtụtụ nde ndị ọrịa kansa n'ụwa nile olileanya ọhụrụ bụ ndị na-anata ọgwụgwọ chemotherapy na anthracycline ma nọ n'ihe ize ndụ nke mmebi dị njọ na nke na-adịgide adịgide n'obi ha.
A maara Anthracyclines n'ọtụtụ ebe dị ka ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa cancer kachasị dị irè emepụtara ma jiri ya mee ihe n'ụdị ọrịa cancer karịa ụdị ọ bụla ọzọ nke ọgwụ mgbochi ọrịa cancer., gụnyere leukemias, lymphomas, neuroblastoma, akụrụ, imeju, afo, uterine, thyroid, ovarian, sarcomas, eriri afo, akpa ume na ọrịa ara. Otú ọ dị, egwu maka mmetụta ọjọọ nke anthracyclines na-enwe n'obi emewo ka ọtụtụ ndị ọkà mmụta banyere oncologist kwụsịtụ iji ọgwụ ndị a dị oke irè eme ihe. Nchọpụta nke agbụrụ nwere ike gbanwee ojiji nke anthracyclines site n'ikwe ka ndị ọkà mmụta oncologists jiri ọgwụ ndị a dị ike mee ihe n'ụzọ zuru ezu na-egbochi ọrịa cancer na-atụghị egwu mmebi obi na-adịgide adịgide.
Ndị Zantrene® A na-eduzi mmemme nyocha nchekwa obi site n'aka ndị na-eme nchọpụta cardiotoxicity a ma ama, Prọfesọ Aaron Sverdlov na Doan Ngo, na mmekorita ya na ọkachamara sayensị cancer Associate Prọfesọ Nikki Verrills, na Mahadum Newcastle.
Osote Prọfesọ Aaron Sverdlov kwuru, sị: "Ka ọ dị ugbu a, echiche nke ọgwụgwọ ọrịa cancer nwere ike ọ bụghị nanị na-abụghị cardiotoxic ma, n'eziokwu, enyochaghị cardio-protective ma ọ bụ ọbụna nwee obi ụtọ, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi 'ọrịa a kapịrị ọnụ na nlekọta ahụike. Nsonaazụ anyị na-atụ aro na Zantrene, ọgwụ mgbochi ọrịa kansa dị irè, nwere ike inye nchebe n'otu oge megide mmetụta nsị na obi site na otu n'ime ọgwụ chemotherapy a na-ejikarị, doxorubicin. Nke a bụ ihe akaebe mbụ nke ụdị ya iji gosi na enwere ọgwụgwọ nke na-elekwasị anya na ọrịa kansa ma na-echebe obi! Nke a nwere ike imeziwanye nsonaazụ ahụike maka ọtụtụ ndị ọrịa kansa na ndị lanarịrịnụ site n'ịkwalite ọgwụgwọ ọrịa kansa ha ma na-egbochi mmepe nke ọrịa obi.
Ọ bụ ezie na nke a bụ nchọpụta ọhụrụ na-akpali akpali, Zantrene® (bisantrene dihydrochloride) nwere ogologo akụkọ ihe mere eme ụlọ ọgwụ, ebe emepụtara ya na 1970 dịka ụzọ nchekwa obi karịa anthracyclines tupu nnabata na France na 1990s. Ọ bụ ezie na egosipụtara na nchekwa obi Zantrene emelitere n'ihe karịrị nnwale ụlọ ọgwụ 50, , Ajuju ma Zantrene nwere ike inye aka gbochie mmebi obi nke anthracyclines kpatara.
N'ikwu okwu banyere nsonaazụ nyocha ọhụrụ ahụ, Onye isi ngalaba sayensị nke Race, Dr Daniel Tillett kwuru: "Ịchọta na Zantrene nwere ike ichebe obi site na chemotherapy ma na-egbukwa ọrịa cancer ka mma bụ ihe 'kacha mma nke ụwa abụọ' pụrụ iche. Ebe a na-eji anthracycline eme ihe n'ọtụtụ nde ndị ọrịa cancer kwa afọ, ọ na-esiri ike ịkwupụta ikike ahụike na azụmahịa nke ọganihu a!"
N'ihe atụ izizi a, Zantrene na-echebe mkpụrụ ndụ akwara obi site na mmebi site na doxorubicin ma na-emekọrịta ihe na anthracyclines iji gbuo mkpụrụ ndụ kansa ara nke ọma.
Ọsọ ewepụtala ngwa patent na-agwa njikọ nke Zantrene na anthracycline maka nchekwa obi ndị ọrịa. Ikike ikike a (ọ bụrụ na enyere ya) ga-enye nchebe nke ngwakọta ọgwụ na ojiji ụlọ ọgwụ ya ruo na 2041.
Nchọpụta nchekwa obi ọhụrụ a ga-aga n'ihu n'ụlọ ọgwụ ngwa ngwa. Akụkọ gbasara ụlọ ọgwụ sara mbara nke Zantrene na-enye ohere ka ngwakọta a nwee ọganihu ngwa ngwa n'ụlọ ọgwụ.
Mkparịta ụka dị elu na-aga n'ihu na ndị dọkịta nọ n'Australia iji mee nnwale ụlọ ọgwụ Phase 2b na ndị ọrịa ara ara nwere nnukwu ihe egwu nke mmebi obi anthracycline kpatara.
Nchọpụta a na-emepe ohere ahịa ọhụrụ maka Zantrene nke nwere ike ịgwọ ọrịa na nke azụmahịa na nchọpụta mbụ na Zantrene bụ ihe mgbochi FTO nwere ike.
Ọmụmụ anụmanụ ka aga-eme na Q4 CY2021/Q1CY2022.
Ọmụmụ ihe ndị ọzọ na-aga n'ihu iji nyochaa ma ọ bụrụ na Zantrene nwere ike ichebe obi site na mmebi nke ọgwụ ndị ọzọ chemotherapeutic nke a makwaara na-akpata cardio-emebi.
Ọmụmụ ihe ndị ọzọ iji chọpụta usoro mkpụrụ ndụ nke Zantrene's cardio-protective. Nke a nwere ike ikwe ka njirimara nke ọrụ nchebe ọzọ nke Zantrene.
Mmepe nke usoro nchikota ọgwụ ọhụrụ kachasị mma nwere uru ụlọ ọgwụ na azụmaahịa ka mma.
Mmalite nke usoro ọgwụgwọ ọrịa ara ara 2b na 2022.